Masks clothes Na-arụ ọrụ uwe • ọkachamara P&M kọmputa
Ihe mkpuchi nchedo Ha nwere ike nyere aka nke ukwuu igbochi mgbasa nke ọrịa ụfọdụ nke akụkụ okuku ume na. Ha bụ ezigbo ọta maka usoro iku ume anyi. Ihe nkpuchi dị otú ahụ, na-ekpuchi imi na ọnụ, na-egbochi ịnweta ogige ndị na-emerụ ahụ, mana na-egbochikwa mmetọ aka emetụ ihu. N'agbanyeghị nke a, ikpuchi nkpuchi anaghị eme ka mmadụ ghara ibute ọrịa.
Ekwesịrị iji ihe nkpuchi na-ekpuchi ya na usoro ndị ọzọ iji gbochie ọrịa.
Otu iwu kachasị mkpa bụ nnabata aka ọcha na usoro iku ume, yana izere ịbịaru nso, ọ kachasị mma idowe ebe dịkarịa ala otu mita na ndị ọzọ. Site na itinye iwu ndị a dị mfe, anyị na-enyere onwe anyị aka nke ukwuu izere ịkpọtụrụ nje ahụ.
Ejiri ihe mkpuchi nchebe na - ekewa:
Ọtụtụ na-adabere na ihe a na-etinye na ha. Ihe nkpuchi dị ka akụkụ nke uwe ọrụ nwere ike ịbụ akụkụ nke uwe dị mkpa kwa ụbọchị nke onye ọrụ. Ndị a na-ahụkarị n’ụlọ ahịa ọgwụ dị nonwovens, ha nwere obere ahịrị ma dị mfe iyikwasị, mana a ga-atụfu ya mgbe ojiji nke mbụ.
Mkpuchi nkpuchi Cotton siri ike ojii iduhie dị na ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị >>
Ihe mkpuchi owu ha bara uru nke ukwuu na ọ zuola ịhazi ha na oke igwe ọkụ iji nwee ike iji ha ọzọ. Maka ebumnuche a, o zuru ezu iji saa ahụ na ogo 60, ị nwekwara ike iji mmiri mebie ha site na iji ike kachasị elu ma ọ bụ site na ịsa mmiri. Ọzọkwa, ihicha ihe nkpuchi na nhazi nke iji obere mmanya 70% rụọ ọrụ ga-adị irè. Naanị fesaa ihe nkpuchi ahụ na mmiri ma chere ka o kpọọ nkụ.
N'agbanyeghị echiche zuru ebe nile banyere adịghị adị nke nchebe nchebe, ọ bara uru ị payinga ntị n'eziokwu ahụ bụ na ọbụlagodi nkpuchi na-ezughị okè nwere ike ịmepụta uwe nchebe, yie mmetụta nke anya na-atụ aro nke 2 mita na kọntaktị ndị nwere mmekọrịta.
Etu esi eyi mkpuchi ihu mgbe ọ dị mkpa ruo ọtụtụ awa?
Ọ bụ ihe nwute, maka ọtụtụ n'ime anyị, iyi mkpuchi bụ ihe na-agwụ ike, ọkachasị ọtụtụ awa kwa ụbọchị. Then nwere ike nwee ahụ ahụ ume mmụọ ma ọ bụ ihi ụra n'ihi ikuku oxygen dị ala.
Iji belata ahụ erughị ala na-esite n'iji nkpuchi ahụ mgbe niile, naanị ị ga-echeta iwu dị mfe. Nke mbu, yiri nkpuchi naanị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na anyị anaghị eso ndị nọ n’èzí aga ozi ma anyị anọghị n’ebe ndị mmadụ na-anọ, ọ bara uru na nbudata ya, ọ bụrụgodị ruo ọtụtụ minit. Oge ezumike ga-eme ka ị zuru ike ma mee ka ikuku oxygen.
Ọ bakwara uru inwe ọtụtụ nkpuchi echegharị echegharị. Onu ogugu, mmadu zutara ihe dika nkpuchi 8-10 (ma zuta ha mgbe ha kara nká), ka ha nwee ike igbanwe ubochi ma saa ha - dika nke anyi ji akwa ime. Ọ bụrụ na anyị ga-anọ na ebe mechiri emechi, ọ dịkwa mma imeghe windo ma na-eku ume. Anyị ga-achọpụta ihe dị iche na otu ị na-eche ugboro ugboro.
Uwe mkpuchi ihe eji acha anụnụ anụnụ maka ọnụ na imi dị na ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị >>
Kedu otu nkpuchi nwere ike isi nyere anyị aka na ndụ kwa ụbọchị?
Ejiri ihe nkpuchi ahụ kpuchido sistem iku ume anyị. N'agbanyeghị mmụba ọ na-ewu ewu n'ihi ọrịa na-efe efe, ọ bara uru ị attentiona ntị n'ọnọdụ ndị ọzọ iji ya ga-enyere anyị aka ichebe ahụike anyị.
Kemgbe ọtụtụ ọnwa, anyị na - enweta ihe ọmụma banyere nke ugbu a site na mgbasa ozi akụkọ smogsite na nke ị ga - ahụ maka mmụba na - akpata mmetọ n'oge oge kpo oku. Concentta ya na-etolite bụ ihe kasị dị ize ndụ na nnukwu agglomerations nwere nnukwu ụgbọ njem na osisi ndị mepere emepe.
Ndị bi n'obodo ndị kasị ibu n'ụwa, n'iburu nke a n'uche, ejirila ihu ihu ogologo oge. N'aka, na oge opupu ihe ubi na oge ọkọchị, anyị na-ekpughere ụdị ụdị ịgba, ebe eji ọgwụ na-egbu ọgwụ ma ọ bụ nchebe megide anwụnta, ahịhịa na ụmụ ahụhụ ndị ọzọ. Ọzọkwa mgbe ana - ehicha ụlọ, ọkachasị nhicha izugbe site na iji ihe nhicha siri ike, anyị kwesịrị iji ihe nkpuchi kpuchie ọnya okuku ume anyị, ka anyị wee ghara iku ume ikuku.
Ihe mkpuchi ihu ihu AsiaFacials BielendaBielenda nwere nkpuchiMasiki ihu ihuihu ihu dị mmaezigbo ihu masks si Rossmannebe obibimkpuchi ihu n'ụlọihe eji eme ulo maka ihe otutumkpuchi ihu n'ụlọarụrụ n'ụlọ na-emegharị ihundozi isi uloihe eji eme ntutuihe mkpuchi ihu n'ụlọ maka wrinklesọgwụgwọ ụlọ maka nkpuchi ihuakụkụ ihuhebe ihu masks-esi mee slime na-enweghị gluu na nkpuchikedu ihu ị nwere ike ịkwadoIhe mkpuchi ihu JapaneseNdị nkpuchi ndị KoreaNdị nkpuchi ihu KoreaKoreanlọ ahịa mkpuchi ihu Korealomi lomi irumasksmgbochi anwụrụ ọnụmasks ịwa ahụmasks maka ụmụ nwokenkpuchi ihuihu masks allegroavon ihu iheagafia babushka ihuladybug ihu masksBielenda nwere nkpuchiihu nkpuchi maka ụmụ nwokenkpuchi ihu ụlọmkpuchi ihu n'ụlọHebe ihu masksna-asacha ihu nkpuchinyocha nkpuchi ihumasks ihu ihunkpuchi ihu rossmannIhe mkpuchi ihu Sephoramasks ihu ihukpuchie ihu na sachetsmasas ihu masksziaja kpuchie yaihu masks ụmụ anụmanụntutu isiebe obibinkpuchi ihu ụlọmasịNdị nkpuchi ndị Koreamasịrị ihu masịrịmasks ahụikenkpuchi otutunkpuchi ihuihe eji eme ulonkpuchi isintutu isimasks mmirimgbochi mmiri ihu masksihe eji eme mmiri ihunkpuchi na-echebenhicha nhichakpuchie ihu ihuna-edozi ahụ masksbee apụ masksnkpuchi anyamasị rossmannIhe mkpuchi onwe onyemasks mpempe akwụkwọmpempe akwụkwọ kpuchie 50 iberibeMpempe akwụkwọ edoberekpuchie ihu masksụmụ nwoke ihumissha facialsmasks kachasị mmamasks ihu ihu kachasị mmamasks ekemasks eke ihumasks eke ihumgbochi mmiri ihu masksuwe mgbasa oziahịhịa maka itinye ihe nkpuchi ahụMasks ihu ihu tụrụ aroọkachamara ihu nkpuchiEzi ntụziaka maka ihe eji eme ihunkpuchi ihu rossmannnkpuchi ihu rossmannIhe mkpuchi ihu Russiamasịrị ihu mmiri sephoramasịrị ihu mmiri sephoraara79 nkpuchiọnụ ala ihu dị ọnụ alaọnụ ala ihu